Coast code decoder dufcaddii, hubi taariikhda wax soo saarka la isku qurxiyo
CheckFresh.com Bogga hoyga
Hubi taariikhda soo saarista cadarka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo
CheckFresh.com waxay akhridaa taariikhda wax soo saarka ee koodka dufcadda.
Dooro calaamad si aad u aragto tilmaamaha sida loo helo koodka dufcadda.
🚗 Haddii aad rabto in aad ogaato da'da taayirkaagu, isticmaal CheckTire.com.
Muddo intee le'eg ayay isku qurxin cusub tahay?
Sidee loo helaa koodka dufcadda? (tusaalooyin)
Sidee loo iibsadaa waxyaabaha la isku qurxiyo oo cusub oo aad u dheereyso?
Sideen ku helaa koodka koodhka isqurxinta ee Coast ama cadarka?
Waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay soo saartay ama qaybisay HRB Brands:
Sidee bay u egyihiin koodhadhka dufcadaha? Fiiri tusaalooyin
2023410 - Kani waa koodka saxda ah. Ka hel koodka xirmada u eg.
520032 69% 36M 8011003804566 20900 - Kani maaha kood badan. Ha galin qiimayaal sidan u eg.
6901 - Kani waa koodka saxda ah. Ka hel koodka xirmada u eg.
3145891263107 126.310 92200 W1J 6DG - Kani maaha kood badan. Ha galin qiimayaal sidan u eg.
ℹ️ Tani waa caawimo guud - waxaad ku hagaajin kartaa adiga oo soo gudbiya sawirka koodka dufcada soo saaraha support@checkfresh.com.
Yaa inta badan hubiya taariikhda Coast cosmetics?
🇻🇳 Vietnam 66.43% 93
🇺🇸 Maraykanka 17.86% 25
🇹🇭 Thailand 4.29% 6
🇸🇦 Sacuudi Carabiya 3.57% 5
🇷🇴 Romania 1.43% 2
🇵🇰 Pakistan 1.43% 2
🇵🇭 Filibiin 1.43% 2
🇮🇷 Iran 1.43% 2
🇺🇦 Ukraine 0.71% 1
🇬🇧 Boqortooyada Ingiriiska 0.71% 1
Sannadodee ayaa la hubiyay taariikhda alaabta la isku qurxiyo ee Coast?
2022 - ~140
Nolosha shelf ee alaabta isqurxinta waxay kuxirantahay muddada furitaanka kadibiyo taariikhda soosaarka.
Muddada furitaanka kadib (PAO). Qaar ka mid ah waxyaabaha la isku qurxiyo waa in lagu isticmaalo muddo cayiman ka dib marka la furo sababo la xiriira oksaydhka iyo microbiological. Baakaddoodu waxay leedahay sawir dhalo furan, gudaha dhexdiisa, waxaa jira tiro ka dhigan tirada bilaha. Tusaalahan, waa 6 bilood isticmaalka ka dib furitaanka.
Taariikhda wax soo saarka. Waxyaabaha la isku qurxiyo ee aan la isticmaalin waxay sidoo kale luminayaan cusubigooda oo noqdaan kuwo qallalan. Sida uu qabo sharciga EU, soo-saaruhu waa inuu ku dhejiyaa taariikhda dhicitaanka kaliya alaabta la isku qurxiyo ee cimrigooda shelf ka yar yahay 30 bilood. Xilliyada ugu badan ee ku habboonaanta isticmaalka laga bilaabo taariikhda wax soo saarka:
Cadar leh aalkolo - ilaa 5 sano
Qurxinta daryeelka maqaarka - ugu yaraan 3 sano
Qurxinta qurxinta - laga bilaabo 3 sano (mascara) ilaa in ka badan 5 sano (budo)
Nolosha shelf ayaa laga yaabaa inay kala duwanaato iyadoo ku xiran soo saaraha.
Shuruudaha isticmaalka | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Xusuusin sii deynta | Support | Immisa jir ayay taayiradaadu yihiin?
Dhammaan calaamadaha ganacsiga kale waa hanti ay leeyihiin milkiilayaashooda waxaana loo soo bandhigay ujeeddooyin macluumaad oo keliya. Dhammaan xuquuqaha way xifdiyeen